I-Kiitan isibonisa iindlela ezi-4 zeChichi zokuBopha i-Ankara yengubo yentloko
I-Rave News Digest: I-Biodun Fatoyinbo inyathela ezantsi, uBhuti omkhulu uNayija 2019 Ukukhaba uKick, Taylor Swift + Okungakumbi
DUyakhumbula xa amantombazana amancinci ayesebenzisa intloko isongele ngokuyintloko yokufihla iinwele ezingcolile okanye ukukhula iinwele ezimfutshane? Namhlanje, isisongelo entloko siyifashoni ethandwayo yefashoni kwihlabathi liphela kwaye isongelo sentloko se-Ankara sisiphikisi sithandwa kakhulu.
Ngelixa ukusonga ngentloko kwe-Ankara bekule mdlalo iminyaka embalwa, bekuze kube kulo nyaka uphelileyo ukuthandwa kwayo kufezeke- enkosi ngenxalenye Black Panther/Wakanda Into ebonakalisa ukukhanya okukhulu kwimfashini yaseAfrika. Ukusukela ngoko, uninzi lwabasetyhini luye lwabonisa umdla wokufunda ukubopha i-Ankara yentloko. Ukuba ukule tafile, unethamsanqa njengobuhle obuphakathi kunye nendlela yokuphila kunye ne-blogger yobuhle Isi-Kiitan. A. usanda kwabelana ngokuthe ngqo kwi-video ye-point-to-point kwii-4 iindlela ze-chic kakhulu zokubopha i-Ankara entloko yokuhombisa.
Uza kubona nje ukuba i-Kiitan idale njani izitayile ezi-4 ezahlukileyo zentloko zokuzihombisa ngokulula nangexesha elincinci. Ezi zitayile zilula kwaye ziyonwabisa kwaye zinokubhalwa mihla le ukuba indlela yakho yokuphila ivumela. Eyona nto siyithandayo ngezi zitayile kukuba zipholile kangangokuba azithinteli ukhetho lwakho lwefashoni. Ungabagibisela ngengubo, i-jumpsuit, i-denim okanye okanye ukubukeka okuqhelekileyo.
Ukuba ujonga iindlela ze-chic zokunxiba entloko ngelixa uvumela iinwele zakho ukuba uzithande ngakumbi njengo-Kiitan uxhokonxe i-hers kwi-braids ezinde.
Nazi iindlela ezi-4 ze-chic zokubopha u-Ankara wentloko yentloko…
Isikwati esiphefumlelweyo seBandana
Isisongelo esilula seFonti
Ukulungele ukufunda ukubopha i-Ankara entloko entloko njenge pro?
Ifoto yetyala: IG | Kiitan.A
i-ankara entloko Ankara esonga I-blogger yobuhle Iimbonakalo intloko isongele i-kiitan A yokuphila YouTuber
Ulonwabo Udo Julayi 1, 2019
Awukaze ubabone nayiphi na into efana neqoqo le-Thom Browne SS20